Sirivha Alloy Wire, Bata Rivet, Bata Zano - ZHJ
ZHJ chirongwa chenyika che torch hi-tech bhizinesi mumutsara wezvinhu zvekuonana.
Edza kuita kuti vatengi vedu vafare
SHZHJ anogona kubereka kubva sirivha chiwanikwa waya uye ubvise, saka tinogona kuvandudza uye kugadzirisa kwedu zvinhu muitiro maererano vatengi 'chinodiwa. SHZHJ 100% tarisa zvigadzirwa zvisati zvabuda kunze kwefekitori yedu, uye isu tine chitupa chekuyedza chega chega chekutumirwa.
Yakasarudzika tekinoroji mubatanidzwa
Yedu masevhisi anotangira kubva kune yakakosha simbi yekudzokorora kuburikidza nekutsika tekinoroji kune epurasitiki-yakaumbwa magungano. Ichokwadi kune chirevo, "Chiso kumunhu mutengi", tinoderedza nzvimbo dzevatengesi uye tinogadzira mhinduro dzemhando yepamusoro uye dzekutengesa dzakanakira vatengi vedu.
Yakasarudzika zvinhu kuziva-sei
Panowanikwa simbi nemagetsi, tinopa vatengi vedu hunyanzvi hwakasiyana nezvezvinhu, nzvimbo uye kugadzirisazve. Aya ndiwo maratidziro akavimbika ekutaurirana kubva kukambani SHZHJ akagadzirwa kweanopfuura makore gumi.
Zvikamu Shanghai ZHJ Technologies Co., Ltd.
Shanghai ZHJ Technologies Co, Ltd. yakavambwa mugore ra2007, Kubva pakutanga: SHZHJ, TARISA PAKUTANGANIRA ZVINOKOSHA! ZHJ chirongwa chenyika che torch hi-tech bhizinesi mumutsara wezvinhu zvekuonana. ZHJ yakazvipira kushandiswa kwesainzi yazvino uye tekinoroji kugadzirisa dambudziko nezvinhu zvekubatana, ZHJ zvigadzirwa zvikuru zvinosanganisira zvitanhatu zvakateedzana zvesirivha alloy waya, contact rivet, contact tip, bhatani rekubata, bata Assembly uye Tungsten Contact, Kuburikidza neruzivo rwedu mune simbi dzinokosha. kugadzira kweanopfuura makore makumi maviri uye yedu yakafara kuziva-kwazvino mukutakura magetsi ekubatana. Isu tiri mudiwa wesarudzo yemakambani mazhinji muhupamhi hwakawanda maindasitiri uye mune angangoita matunhu ese emusika.